Accueil > Gazetin'ny nosy > CRAM “Olom-baovao no ilain’ny firenena malagasy”
CRAM “Olom-baovao no ilain’ny firenena malagasy”
Hoy ingahy Ratsiraka Didier izay filoham-pirenena teo aloha raha nanontanian’ny mpanao gazety mahakasika ny fanatanterahana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’ity taona 2018 ity izy: “tsy ny fifidianana no mahamaika fa tokony halamina aloha ny firenena”.
Mizara maro ny fomba fijerin’ireo mpanao pôlitika. Misy ny milaza fa tokony hatao ny fifidianana ka izay lany ho filoham-pirenena no manamboatra ny fanatanterahana ny fanovana ny Lalàmpanorenana. Misy indray no milaza fa alamina aloha ny firenena ka amboarina hatrany ifotony ny olana amin’ny lisi-pifidianana, ny fitantanana ataon’ny CENI (Vaomiera mahaleo tena momba ny fifidianana), ny lalàm-pifidianana, izay niteraka olana teto Madagasikar ahatramin’izay ary mbola mitranga sy miharatsy hatrany izany amin’izao fotoana izao.
Misy indray koa ireo milaza fa aleo aloha ovana Lalàmpanorenana, ka aorian’izay vao manao ny fifidianana izay ho filoham-pirenena.
Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina indray dia nanambara tamin’ny zoma faha 5 janoary 2018 teny amin’ny fampiarahabana nahatratra ny taona fa tsy maintsy tanterahana amin’ity taona ity ny fifidianana. Ny parlemantera roa koa dia nivory tao Anosy tamin’ny faran’ny taona 2017 lasa iny nandinika ny momba ny hanitsiana ny Lalàmpanorenana.
Ny avy amin’ny fiaraha-monim-pirenena indray dia manamarika ny tsy fahatomombanan’ny fikarakarana ny fifidianana satria hatramin’ny lisitra ny mpifidy no tsy tomombana hatramin’izao. Ny isan’ny birao fandatsaham-bato tsy fantatra mazava na firy na firy. Malaina ny hisoratra anarana amin’ny fifidianana ny vahoka Malagasy. Ny volabe mitentina 3 miliara nomen’ny PNUD (Fandaharanasan’ny Firenena Mikambana momba ny fampandrosoana) dia tsy tonga any amin’ny sehatra hiasany hatramin’izao fa misy ny tsy fanomezan’ny ministeran’ny Vola izany vola azo izany fa ny ampahany ihany. Voalaza nefa fa hanatanterahana ny fitsarana mitety vohitra momba ny fahazoana kôpiam-pahaterahana sy ny fanamboarana kara-panondrom-pirenena no antony nanomezana izany vola izany. Manontany ny depiote avy any Arivonimamo ingahy Rodin ny antony tsy ampiasana io vola io amin’ny tokony ho izy toa izao. Ny faha 31 janoary 2018 nefa dia hifarana ny fotoana ahazoana manoratra farany amin’ny listra ny mpifidy any amin’ny fokontany.
Milaza ny ankamaroan’ny vahoaka Malagasy fa na inona na inona no hataon’ny antoko HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) sy ingahy filohampirenena Hery Rajaonarimampianina dia tsy ho lany eo intsony eo izy. Hangala-bato ireo raha ho lany eo io, hoy hatrany izy ireo. Ary raha toa ka lany eo io dia tsy hanaiky intsony izahay na inona na inona hataony. Htrany ambanivohitra ka hatraty ambonivohitra manerana an’i Madagasikara dia izany avokoa no teny avoakan’ny olona.
Ny dikan’izany rehetra izany dia mazava ho azy fa mananontanina indray ny ady pôlitika izay miteraka krizy sy ady an-trano. Tsy misy fifampitokisana intsony amin’ny vahoaka sy ny mpitondra. Tsy maintsy hiafara amin’ny krizy vaovao indray izao raharaha izao raha toa ka tsy hahitam-bahaolana haingana dia haingana. Ny vondrona iraisam-pirenena dia efa nanambara ny heviny fa mampanahy ny mafy ny hisian’ny korontana pôlitika indray eto Madagasikara indray. Ny fitondrana moa toa lany andro miady amin’ingahy Houcine Arfa indray ankehitriny ka manadino tanteraka ny raharaham-pirenena. Fahafaham-baraka tsy misy toa izany no mahazo ny fanjakana Malagasy eo anatrehan’ity raharaha ity. Izay hita fa tsy manan-kambara intsony.
Ny mahagaga dia ny faneken’ny Malagasy izao loza mananontanona ny firenena izao ka samy mangina avokoa na ny mpitondra fivavahana sy ny raiamandreny ara-panahy maro samihafa, ny olon-kendry fa indrindra ireo mpanao pôlitika sy ny manam-pahaizana. Jerena fotsiny ny loza mitatao amin’ny firenena ankehitriny.